I-China izosusa i-Boeing 737 MAX ibuyele esibhakabhakeni sayo
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » China » I-China izosusa i-Boeing 737 MAX ibuyele esibhakabhakeni sayo
Abashayeli bezindiza baseShayina bazodinga ukuqedela ukuqeqeshwa okusha ngaphambi kokuba izindiza zezentengiselwano ziqale kuyilapho i-Boeing idingeka ukufaka isofthiwe eyengeziwe kanye nezingxenye.
The Ukuphathwa Kwezindiza ZaseChina (CAAC) umemezele namuhla ukuthi ukhathazekile IBoeing 737 MAX amajethi asesuliwe ukuze abuyele ekundizeni e-China - imakethe yokugcina enkulu lapho indiza yayilinde ukugunyazwa.
I-China inenani elikhulu kunawo wonke I-737 MAX imikhumbi ngemuva kwe-US, enezindiza ezingama-97 ezisetshenziswa abathwali be-13 ngaphambi kokumiswa.
“Ngemuva kokwenza ukuhlolwa okwanele, I-CAAC ibona ukuthi izinyathelo zokulungisa zanele ukubhekana nalesi simo esingaphephile,” kusho lo mbiko I-CAAC kusho kusizindalwazi sayo, eqeda ukuvinjelwa kwendiza eChina iminyaka emithathu.
Ngokusho the I-CAAC, abashayeli bezindiza baseShayina kuzodingeka baqedele ukuqeqeshwa okusha ngaphambi kokuba izindiza zezentengiselwano ziqale kuyilapho i-Boeing idingeka ukufaka isofthiwe eyengeziwe nezingxenye.
I-United States ivumele izindiza ukuthi ziqale futhi ngoDisemba 2020 ngemuva kokuthi kwenziwe izinguquko ezithile zesofthiwe nezintambo. I-European Union yanikeza imvume yayo ngoJanuwari. IBrazil, iCanada, iPanama, neMexico, kanye neSingapore, iMalaysia, iNdiya, iJapane, i-Australia, neFiji nazo ziye zanikeza imvume yazo.
“Isinqumo se-CAAC siyingqopha-mlando ebalulekile ekubuyiseleni ngokuphepha I-737 MAX ukusebenza eChina,” kusho uBoeing, wengeza ngokuthi usebenzisana nabalawuli "ukubuyisela indiza ukuthi isebenze emhlabeni wonke."
Ngo-2020, iChina yadlula i-US yaba yimakethe yezindiza enkulu kunazo zonke emhlabeni, ngokusho kweCenter for Aviation data.
zezindiza Boeing Boeing 737 China iyuniyani yase-Europe Fiji isofthiwe I-united states
I-France ibeka i-Mauritius ohlwini lwayo olusha 'olubomvu'
Imikhawulo emisha yokuhamba yase-US ngemuva kosongo lwe-Omicron
USir Richard Branson ukhulume ngokweseka...
Ukunciphisa Ukubambezeleka Ekuhlonzeni Izifo Eziyinkimbinkimbi Zamaphaphu
Incwadi Evulekile Yenhlangano Yezokuvakasha Kazwelonke yase-Ukraine: Ingabe...
Iqembu elikhulu lezindiza ezithwala impahla eRussia zonke...
Memeza nge-Ukraine !!! U-Ivan Liptuga, Ubuso Obusha be...
I-UAE kanye ne-Maldives yibona ababusa imali yamahhotela emhlabeni wonke
Ukuhlaziywa kwedatha kuqala ocwaningweni lwe-metastatic ethuthukisiwe...
Izimfihlo Zomnikazi Wesikhathi Sezidaluliwe